Portugal, Sweden, na Canada ọtụtụ ndị njem njem LGBT nwere omume enyi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Portugal, Sweden, na Canada ọtụtụ ndị njem njem LGBT nwere omume enyi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
N'ihi mmezi iwu maka ndị trans-na intersex yana atụmatụ mpụ na-akpọ ịkpọasị asị, Portugal na nke mbụ jisiri ike si na nke 27 gaa na elu nke SPARTACUS Gay Travel Index, ma na-ekerịta ebe 1 na Sweden na Canada .
A na-emelite akwụkwọ nyocha SPARTACUS Gay Travel Index kwa afọ iji gwa ndị njem banyere ọnọdụ nke ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị, nwoke nwere mmasị nwoke, bisexual, na transgender (LGBT) na mba 197 na mpaghara.
Otu n'ime kpakpando nke afọ a bụ India, nke, n'ihi mmebi nke mmekorita nwoke na nwoke na nwanyị na ọnọdụ mmekọrịta ọha mmadụ ka mma, esila na 104 gaa 57 na Travel Index. N’afọ 2018 ka emegidere mpụ nke mmekọ nwoke na nwoke na Trinidad na Tobago na Angola.
Site na nnabata nkwado iwu nke nwoke na nwoke na nwanyị ịlụ nwanyị, Austria na Malta nwekwara ike ịchekwa ebe n'elu SPARTACUS Gay Travel Index 2019.
Agbanyeghị, ọnọdụ maka ndị njem LGBT na Brazil, Germany na USA ka njọ. Na Brazil na USA, gọọmentị ndị nwere ikike nnabata na-ewebata atụmatụ ewepụ ikike LGBT nwetara n'oge gara aga. Omume ndị a emeela ka mmụba nke ime ihe ike na mmejọ transphobic. Enweela mmụba nke ime ihe ike megide ndị LGBT na Germany. Ezughi oke iwu nke oge a iji chekwaa transgender na intersex yana enweghị enweghị atụmatụ ọ bụla megide ime ihe ike nke nwoke na nwanyị mere ka Germany gbadaa site na 3 ruo 23.
Mba dị ka Thailand, Taiwan, Japan na Switzerland nọ n'okpuru nlekọta pụrụ iche. A na-atụ anya na ọnọdụ a ga-akawanye mma na 2019 n'ihi mkparịta ụka banyere iwebata iwu iji kwado alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị. Thailand ebula ụzọ ebe 20 iji nọrọ ogo 47 n'ihi mkpọsa a na-emegide mmekọrịta nwoke na nwanyị na iwebata iwu iji mata mmekọrịta nwoke na nwanyị. Nkwupụta ekwuputala nke iwu nwoke na nwoke nwere ike ime ka Thailand bụrụ njem njem LGBT kacha nwee mmasị na Asia.
Na Latin America, mkpebi nke -tù Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ n’America (IACHR / CIDH) chọrọ ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba nile nke Latin America ịnakwere alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị inwewo ihe na-akpali akpali. Ruo ugbu a, alụm di na nwunye iwu kwadoro naanị na mba Argentina, Colombia, Brazil, Uruguay na ụfọdụ steeti Mexico ọ bụla.
Fọdụ mba ndị kachasị dị ize ndụ maka ndị njem LGBT na 2019 gụnyere Saudi Arabia, Iran, Somalia na Chechen Republic dị na Russia, ebe a na-akpagbu ndị na-edina ụdị onwe ma na-eyi ha egwu ọnwụ.
SPARTACUS Gay Travel Index na-achikota site na iji njirisi 14 na uzo ato. Categorydị nke mbụ bụ ikike obodo. N'ime ihe ndị ọzọ ọ na-enyocha ma a ga-ahapụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma enwere iwu na-emegide ịkpa oke ebe, ma ọ bụ otu afọ nkwenye ahụ metụtara ma ndị nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị idina nwoke. Edere ịkpa ókè ọ bụla na ngalaba nke abụọ. Nke a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, mgbochi njem maka ndị bu nje HIV yana mmachi na mpako ma ọ bụ ngosi ndị ọzọ. Na mpaghara nke atọ, a na-enyocha iyi egwu ndị mmadụ na mkpagbu, ikpe ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ ntaramahụhụ ọnwụ. Akụkụ enyochare gụnyere ngalaba na-ahụ maka oke ruru mmadụ bụ "Human Rights Watch", mgbasa ozi UN "Free & Equal", yana ihe ọmụma kwa afọ gbasara imebi oke mmadụ megide ndị otu LGBT